Pentekosta - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-02 > Pentekosta
Talohan’ny nahafatesan’i Jesosy, dia nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy fa handray ny Fanahy Masina, Mpisolovava ary Mpampionona izy ireo. “Tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena”2. Timoty 1,7). Izany no Fanahy Masina nampanantenaina, ilay hery avy any ambony izay nalefan’ny Ray tamin’ny andro Pentekosta.
Tamin'io andro io, ny Fanahy Masina dia nanome alalana ny Apôstôly Piera hanatitra ny iray amin'ireo toriteny mahery vaika izay notoriny. Niresaka izy tsy natahotra an i Jesosy Kristy izay nokapohina sy namono teo aminny hazo fijaliana tamin ny alohan ny tsy marina. Io no notendren'Andriamanitra talohan'ny nanorenana izao tontolo izao, toy ny hatsangana amin'ny maty. Ny apostoly iray dia nitebiteby mafy sy kivy be iray volana monja talohan'izay ka nandà an'i Jesosy intelo izy.
Tamin’io andron’ny Pentekosta io, dia nisy fahagagana lehibe nitranga. Ren’ny olona fa tompon’andraikitra tamin’ny fanomboana an’i Jesosy Kristy tamin’ny hazo fijaliana izy ireo. Tamin’izay fotoana izay ihany, dia nisy 3000 1 teo ho eo tamin’izy ireo nanohina ny fony ka nampahafantatra azy ireo fa mpanota izy ireo ka izany no antony naniry ny hatao batisa. Izany no nametraka ny vato fototry ny fiangonana. Araka ny nolazain’i Jesosy dia hanorina ny fiangonany Izy (Matio 6,18). Tokoa! Amin’ny fanekena an’i Jesosy ho Mpamonjy antsika, dia mandray ny famelana ny fahotantsika sy ny fanomezana ny Fanahy Masina isika: “Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy hianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary hianareo handray izany fanomezana avy amin’ny Fanahy Masina izany. ny Fanahy Masina” (Asa 2,38).
Tahaka ireo ray aman-drenintsika olombelona izay manome fanomezana tsara ho antsika, ny Raintsika any an-danitra dia maniry ny hanome io fanomezana sarobidy indrindra avy amin’ny Fanahy Masina io ho an’ireo izay mangataka aminy. « Raha ianareo, izay ratsy fanahy, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy! (Lioka 11,13). Nomen’ny rainy fanahy tsy hita isa ny zanany: “Fa izay nirahin’Andriamanitra dia milaza ny tenin’Andriamanitra, fa Andriamanitra manome fanahy tsy misy fetra (Jao. 3,34).
Nanao fahagagana lehibe i Jesoa Kristy tamin’ny nananganana ny maty, nanasitrana ny marary, nampahiratra ny jamba ary nampandre ny marenina. Azontsika takarina ve fa ilay Fanahy Masina nomen’Andriamanitra antsika izay nanao batisa antsika ho tena iray sy nampisotro antsika fanahy iray ihany? « Fa fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary samy noforonin’ny fanahy iray ihany.1. Korintiana 12,13).
Tena mahafinaritra ny fahalalana izany: nomen'Andriamanitra anao io Fanahy Masina mahery io mba hahafahanao miaina fiainana an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tomponao sy Mpampianatra anao ary handeha amin'ny làlany. Satria zavaboary vaovao ao amin'i Kristy ianao izay nohamasinin'ny Fanahy Masina ka afaka miaina any amin'ny toerana any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy.